SULTANBET561 GALATASARAY'DA FATİH TERİM'E TRANSFER GARANTİSİ - RESTBET501.COM GİRİŞ
ဂလာတာဆာရေးနည်းပြ Fatih Terim သည်ဇန်နဝါရီလအပြောင်းအရွှေ့ကာလအတွက်စိတ်ပူနေသည်။ စီမံခန့်ခွဲမှုအပြောင်းအလဲဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည့်ဂလာတာဆာရေးမှသမ္မတသစ်သည်စီစဉ်ထားသည့်လွှဲပြောင်းမှုများကိုအပြုသဘောဆောင်စွာချဉ်းကပ်လိမ့်မည်လား။
သူလိုချင်တဲ့သတင်းကပြောင်းရွှေ့ကြေးအသစ်ကိုစိတ်ပူနေတဲ့ Fatih Terim ဆီရောက်လာတယ်။ မည်သူမည်ဝါအာဏာသို့ ၀ င်ရောက်ပါစေဇန်န ၀ ါရီလအပြောင်းအရွှေ့ကာလအတွင်းအတားအဆီးများရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ Mustafa Cengiz သည်သူရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံရသည်ဖြစ်စေ၊ မဟုတ်သည်ဖြစ်စေလွှဲပြောင်းမှုများကိုများစွာအထောက်အကူပြုလိမ့်မည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။
မိုနာကိုမှ Onyekuru၊ Wolfsburg မှ Yunus Mallı၊ Fulham မှ Seri နှင့် Fortuna Düsseldorfမှ Kenan Karaman တို့သည်အဝါရောင်အနီရောင်တွင်အဆက်အသွယ်များစတင်ပြီးဖြစ်သည်။
SULTANBET561 GALATASARAY’DA FATİH TERİM’E TRANSFER GARANTİSİ BETBABA100 GALATASARAY’DA FATİH TERİM’E TRANSFER GARANTİSİ SUPERTOTOBET0120 GALATASARAY’DA FATİH TERİM’E TRANSFER GARANTİSİ RESTBET501 GALATASARAY’DA FATİH TERİM’E TRANSFER GARANTİSİ SULTANBET577 GALATASARAY’DA FATİH TERİM’E TRANSFER GARANTİSİ SUPERBAHİS483 GALATASARAY’DA FATİH TERİM’E TRANSFER GARANTİSİ RESTBET501 FATİH TERİM’DEN TAKIM TOPLANTISI! SUPERBAHİS630 FATİH TERİM’DEN TAKIM TOPLANTISI! RESTBET501 FATİH TERİM’DEN TAKIM TOPLANTISI! SULTANBET561 FATİH TERİM’DEN TAKIM TOPLANTISI!
9 Comments on SULTANBET561 GALATASARAY’DA FATİH TERİM’E TRANSFER GARANTİSİ
UĞUR December 1, 2020 at 1:50 pm
DİLEK December 3, 2020 at 2:50 am
ELİF December 3, 2020 at 5:10 pm
İSMAİL EVREN December 3, 2020 at 10:10 pm
EKİN December 6, 2020 at 2:10 am
BAYRAM December 8, 2020 at 4:30 pm
ÖVGÜ ANIL December 9, 2020 at 7:50 pm
MURAT December 10, 2020 at 9:30 am
HÜR December 11, 2020 at 5:40 pm